Mirror, Arts na Crafts Factory Supplier-SHUNDA - China factory Triange ekara osisi eriri Wall Photo Ngosipụta Hanging Panel shelf OEM na Factory | SHUNDA
Ụlọ ọrụ China Triange akpụrụ akpụ eriri osisi Wall Foto ngosi ihe nleba anya shelf panel
*Nabata ahaziri shelf ọ bụla *
Shelf Hanging Shelf 3-Tier, Boho Rustic Shelves nchekwa osisi Swing, Ụdọ na-adịgide adịgide na-ese n'elu ihe nhazi ihe nhazi nke dị fechaa, shelf na-ese n'elu maka kichin ime ụlọ ịsa ahụ.
Ihe onwunwe osisi, eriri
ONYE NKWU AKỤKWU NA-ESU ESULO:Gosipụta ihe ndozi ụlọ na ihe mkpokọ mara mma ka ị na-enye nchekwa bara uru yana shelf nke elu 3. Shelf mgbidi ndị a na-ekowe na-enye ọmarịcha mgbidi pụrụ iche ma na-agbakwụnye mmecha ahụ n'ime ụlọ ọ bụla n'ụlọ gị.
Ọ dị mma maka ime ụlọ ọ bụla:Shelf ndị a kwụgidere eriri bụ nnukwu ihe ndozi mgbidi obodo maka ụlọ iri nri kichin gị, ime ụlọ, ime ụlọ, ụlọ ọrụ ugbo, ụlọ, ime ụlọ, ma ọ bụ ọfịs. N'aka nke ọzọ, enwere ike kpọgidere ha na mgbidi, n'ihu windo, na windo ma ọ bụ na mbara ala, n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí. Na ha na-edozi ya na mgbanaka agba atọ dị iche iche na nko kwekọrọ.
ỌCHỤRỤ NKE ỌCHỊCHỊ:Ọ dị mma maka foto, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ihe nrite, akụ, obere osisi, na ihe ndozi ụlọ na-agbakwunye agwa na ikpo ọkụ n'ime ime ọgbara ọhụrụ ọ bụla, nke ime obodo, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma ọ bụ nke ọdịnala na-ejuputa mgbidi efu n'elu tebụl, ebe ọkụ, ụzọ mbata, ihe efu, n'etiti windo, na ndị ọzọ. . Kọwaa ihe ndị a n'ime ụlọ gị, ime ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ ọbụna kichin gị! Ụzọ zuru oke iji gosipụta osisi gị, foto gị na obere ihe ndozi ọ bụla.
Ichekwa oghere dị mma: Na-ebuli ohere ka ọ na-ewe elu efu square feet u2014 na-ebelata nkwụsịtụ ma na-egosipụta ihe ndozi na oghere kọmpat na-enye ngwọta shelving pụrụ iche n'ụlọ ọ bụla, ụlọ studio, ụlọ akwụkwọ kọleji, na ndị ọzọ.
Mfe Ịwụnye: Ndị a na-akwakọba osisi ndị nwere eriri na-adị mfe nghọta. Naanị kwụgidere na ntu, ịghasa ma ọ bụ nko. Ụdọ a na-agbanwe agbanwe na-enye gị ohere ka ị kwụgidere n'etiti ma ọ bụ n'akụkụ ọ bụla dị ka swing, na ha nwere ike dị mfe ịkwado.
Shunda Home Decoration factory bụ ọkachamara mirror soplaya nke na-enye mmepụta, imewe, ahịa na mgbe-sales ọrụ maka ụwa ahịa.Our ụlọ ọrụ na-elekwasị anya n'ichepụta na emebe nile di iche iche nke shelf ngwaahịa dị ka gburugburu shelf, ọkara ọnwa shelf, osisi shelf, eriri shelf, okirikiri ọnwa, shelf nwere mirror wdg.
Nke gara aga: Ngosipụta foto mgbidi triange osisi osisi shelf shelf
Osote: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China ọhụrụ imewe triange nwere eriri osisi mgbidi foto ngosi ihe nkwudo panel shelf
shelf eriri osisi
Egwu osisi Shelf Osisi na-ese n'elu mgbidi Shelv...
Osisi Triangle Shelf Wall Hanging Trigon Stora...